သေရည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သေရည်
Posted by မောင် ပေ on Sep 12, 2011 in Creative Writing, Think Different | 11 comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ငါးပါးသီလ ဆိုတာ ကို သိကြပါတယ်
သူရာမေယရ သုရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ဆိုပြီး ဆောက်တည် ရပါတယ်
သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း မှ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏ ဆိုတဲ့ ဆုံးမ စကားတွေ လည်း ရှိပါတယ်
ရှေးတုန်းက ဆိုဆုံးမ ခဲ့တဲ့ သူတွေ က တော့ တစ်ကယ်ကို သေရည်အရက် လုံးဝ မသောက်ဖူးသူ ၊ ရှောင်ကြဉ်ကြသူတွေ ပါ
မှန်ပါတယ်..သူတို့ ဆုံးမ စကား ကို တန်ဘိုးထားပါတယ် ၊ အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ၊ လက်သင့်ခံပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင်သာ မလိုက်နာ နိုင် ၊ မကျင့်သုံးနိုင်လို့မရှောင်ကြဉ်ဖြစ်သေးတာပါ ။
“ ဒီအတွက် ၊ ဒီနေ့ အချိန်ထိ ၊ စာရေးသူဟာ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် ကို မှ ၊ အရက် ဟာ မကောင်းကြောင်း ဆုံးမစကား မပြောခဲ့ဖူးပါ ။ ”
ဘာလို့ မပြောခဲ့တာလဲ ဆိုရင်….
စာရေးသူ အကြောင်း နဲနဲပြောပြချင်ပါတယ်
စာရေးသူ ဟာ မှတ်မိသလောက်
ငယ်စဉ် ၃ ၊ ၄ တန်း အရွယ်လောက် ကတဲ က
အရက် ၊ ဘီယာ သောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်
သင်္ကြန်ပွဲ တွေ မှာပါ
ရေပက်ခံ အတူထွက်တဲ့ အကိုကြီးတွေ က ဇွတ်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပါ
နောက် ၁၀ တန်းကျောင်းသား ဘဝ တုန်းက လည်း တစ်လ တစ်ခါ လောက် သောက်ဖြစ်ပါတယ်
အရက်ကို ဘာလို့ သောက်တာလဲ ဆိုရင်…
သောက်လိုက်တဲ့ အခါ ၊ လည်ချောင်းထဲ ပူဆင်းကျသွားတာ ကို ကြိုက်လို့ 
အရက်သောက်ပြီး မူးတဲ့ အရသာ ကို ကြိုက်လို့ ပါ ။
နောက် ၁၀ တန်းအောင်ချိန် က စလို့ 
ဘော်ဒါများနဲ့ ညနေ ဆုံတိုင်း
မူးမှောက်တဲ့ အထိ လဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
မူးပြီး ရန်တွေ ဖြစ်လို့ ပြဿနာတွေ ရှင်းခဲ့ဖူးပါတယ် ။
မူးပြီး ဟိုရောက်ဒီရောက်တွေ ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
နောက် စာဖတ်များလာတော့ ၊ အရက်သောက်တာ မကောင်းကြောင်း ပိုသိလာရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လည်း အသောက်မပျက် ခဲ့ဘူး ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝ တုန်းက ဆို ၊ သောက်ပြီး ကဗျာတွေ ထိုင်ရေးခဲ့တာ ။
အရက်ဆိုင် က လူတွေ က ဒီကောင် အရက်ဆိုင် မှာ စာအုပ် နဲ့ ဘောပင် နဲ့၊ စာကြိုးစားတယ် ပေါ့ ။
ဘယ်ဟုတ်မလဲ ၊ ဒီကကောင် က မူးတာနဲ့ခံစားချက်တွေ ကို ကဗျာတွေ အဖြစ် ချရေးတော့တာပဲ ။
နဲနဲလေး များလာရင် ၊ ကွန်ပျူတာ စာစီ ၊ မိတ္ထု တွေ ကူးပြီး ၊ ကျောင်းထဲ မှာ လိုက်ရောင်း ရင်း အရက်ဖိုး ရှာခဲ့တာပေါ့ ။
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း ၊ ဆရာသော်တာဆွေ တို့ ရဲ့ စာတွေ ဖတ်ရင်း နဲ့သိလာရတယ် ။
ဆရာသော်တာဆွေ ရဲ့ အရက်သောက်နည်း ၃ ခု ကို
၁။ လူက အရက် ကို သောက်တာ ( ရံဖန် ရံခါ မှ ၊ တစ်ခါ တစ်လေ မှ သောက်တာ )
၂။ အရက် က လူကို သောက်တာ ( ညနေ စောင်းရင် လေပြိုတာ ၊ လေချဉ်တတ်တာ မျိုး )
၃။ အရက် က အရက် ကို သောက်တာ တဲ့ ။ ( မိုးလင်း က တဲ က အရက်နဲ့ မျက်နှာသစ် တာပါ ၊ တစ်နေကုန် ၊ အချိန်ရှိသရွေ့ သောက်တာ )
နံပါတ် ၂ အဆင့်ထိ ပဲ ကောင်းတယ် တဲ့ ။ နံပါတ် ၃ ကို ရောက်ရင် သေမှာပဲ တဲ့ ။
အဲဒီမှာ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပြန်သတိရပြီး ၊ အရမ်းကြီး မသောက်ဖြစ်ဖို့ ဆင်ခြင်ခဲ့တယ် ဗျာ ။
ယနေ့ ၊ အလုပ်လုပ် စီးပွားရှာတဲ့ အရွယ်ပေါ့ ။
ယနေ့ လက်ရှိ တော့ ၊ အနည်းအကျဉ်း သောက်ဖြစ်တုန်းပါ ။
တစ်လ တစ်ရက် လောက်တော့ သောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘီယာ က တော့ သောက်ဖြစ်တာ များတယ် ။
ကိုယ်တိုင် သောက်စား နေမှတော့ ၊ အရက်သမား ပဲပေါ့ ။
နည်းနည်းသောက်သောက် ၊ များများသောက်သောက် ၊
ဒီတော့ ဗျာ…အရက်သောက်တာ မကောင်းပါဘူး ၊ ဘာညာ သံကောင်း ဟစ်မနေချင်ဘူး ဗျာ ။
ဆုံးမစာရေးတယ် ဆိုတာ လွယ်ပါတယ် ဗျာ… ၊ စာဖတ်သူများလဲ သိကြပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင်ကြ မလိုက်နာ ၊ မကျင့်သုံး ပဲ ၊ သူများကိုတော့ ၊ လိုက်နာရမယ် ၊ ကျင့်သုံးရမယ် လို့ မပြောချင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ ဗျာ ။
တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်က သောက်နေရက်ပါနဲ့၊ အရက်သောက်တာ မကောင်းဘူး လို့ သွားဆုံးမ မိလို့ …
ကိုယ်ဆုံးမ လိုက်တဲ့ သူ က ကိုယ်သောက်နေတာ ကို သိလို့ ၊ ပြန်ပြောရင်တဲ့ …
မခံစားရဲပါဘူး ၊ တွေးကြည့်တာပါ ။
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ တော်တော် များများ ၊ ပန်းချီဆရာ တော်တော် များများ ၊ ကဗျာဆရာ တော်တော်များများ ဟာ..
အရက်သောက်သူတွေ ဆိုတာ ၊ သိကြမှာပါ ။
မိုပါဆွန်း ၊ ဂေါ်ကီ ၊ ဗင်းဆင့်ဗင်ဂိုး အစရှိသဖြင့် ။
မြန်မာနိုင်ငံ က နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ၊ စာရေးဆရာကြီးများ ဟာလည်း အရက်သောက်သူတွေ ရှိပါတယ် ။
ဥပမာ ရွှေဥဒေါင်း ၊ သော်တာဆွေ ၊ ကိုငြိမ်း မန်းတလေး ၊ အကြည်တော် စသဖြင့် ။
ဒီလိုရေးတာ ဟာ ၊ အရက်သောက်တာ ကို ကောင်းတယ် လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး
ကာဗာ ယူတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
သူတို့ တွေ ဟာ အရက် ကို ဖြစ်နိုင်ရင် မသောက်ဖို့၊ မနေနိုင်လို့ သောက်မယ် ဆိုရင် လည်း အလွန်အကျွံ မသောက်ဖို့ ဆုံးမခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒီတော့ အရက် ဆိုတာ မကောင်းဘူး ဆိုတာ ၊ ကလေးက အစ သိပါတယ် ။
ကျွန်တော် ရေးပြနေရင် အပိုပါပဲ ။
ကိုယ်တိုင် လည်း သောက်စားနေပါရက်နဲ့၊ သူများသောက်စား တာ ကို လိုက်နှာခေါင်းရှုံ့ ချင်နေသူ တွေ ကို ပါ ။
တစ်ချို့ ကြ တော့ ခွက်ပုန်း တွေ ဗျ ။
ခွက်ပုန်း ဆိုတာ ၊ လူမသိ အောင် ၊ တိတ်တိတ်ကလေး သောက်တဲ့သူတွေ ပါ ။
များသောအားဖြင့် ၊ ဆုံးမ စကား ကို သူတို့ က ပို ပြောတတ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် မှာ ဦးလေး နှစ်ယောက် ရှိပါတယ် ။
နှစ်ယောက် စလုံး အရက်သောက်ကြပါတယ် ။
တစ်ယောက် က တော့ ခွက်ပုန်း ။
တစ်ယောက် ကတော့ ပေါ်တင် သောက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ..သူ့ အချိန် နဲ့ သူ ၊ သူ့ အတိုင်းအထွာနဲ့ သူ ပေါ့ ။
အဲ…ခွက်ပုန်း ဦးလေး က အရက်မသောက်ဖို့ ဆုံးမ လာတော့ ၊ ပြန်ပြောချင်တာ ကို အူကို ယားနေတာပဲ ။
“ ခင်ဗျား ကြ ဘာလို့ သောက်လဲ ၊ ခင်ဗျား ပိုက်ဆံ နဲ့ သောက်နေလို့ လား ပေါ့ ”
ပေါ်တင် သောက်တဲ့ ဦးလေး ကြ တော့ အလွန်အကျွံ မသောက်ဖို့ပဲ ပြောပါတယ် ။
သူ့ ကိုတော့ လေးစားမိပါတယ် ။
အခု …စာရေးနေသူ ဟာ ၊ ဘီယာ သောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အရက် ကိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ မှ ပါ ။
ဒီလို ဝန်ခံဖို့မရှက်ပါဘူး ၊ ရှက်စရာလို့ မထင်ပါဘူး ။
ဘာလို့ လဲ ဆိုရင် ၊ လုံးဝ ဖြတ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိလို့ ပါ ။
သောက်ခဲ့တာလဲ ကြာပါပြီ ။ သောက်သက်လည်း ရင့်ပါပြီ ။
အသည်းအားဆေး လည်း အမြဲ ပုံမှန် သောက်ခဲ့လို့ ၊ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါ ။ ယနေ့ ထိ ။
အဓိက ပြောချင်တာ က တော့ ဗျာ ။ လူ့ သဘော ပေါ့ ဗျာ ။ လူ တစ်ချို့ ဟာ
“ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာတဲ့သူတွေ သောက်စားနေတာ မြင်ရင် ၊ အားကျ သလို လို ရှိကြတယ်၊ လိုက်ပြီး သောက်ချင် စားချင်ကြတယ်
ပိုက်ဆံ မချမ်းသာတဲ့ ၊ သာမန် လက်လုပ်လက်စားတစ်ယောက် သောက်စားနေတာ မြင်ရင်တော့ နှာခေါင်းရှုံ့ ချင်ကြတယ် ၊အပြစ်ပြောချင်ကြတယ် ”
ဖြစ်သင့်ပါ့မလား ဗျာ ။
အရက်သောက်တယ် ဗျာ ။
အရက်မကောင်းတာ သိတယ် ။
ဒါပေမယ့် …သူတစ်ပါး ကို တော့ အရက်မသောက်ဖို့မပြောဘူး ၊ သောက်ဖို့ လည်း မပြောဘူး ဗျာ ။
ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကိုယ်လုပ် ကြတာပါပဲ ။
သူများ အရက်သောက်နေရင် ဘီယာသောက်နေရင် လည်း နှာခေါင်းမရှုံ ခဲ့ဖူးဘူး
သူ့ ပိုက်ဆံ ၊ သူ့ အသည်း နဲ့ သူ သောက်တာ ဗျာ ။ သောက်ပေါ့
ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ၊ ကိုယ့် အသည်း နဲ့ သောက်တာပဲ ….နော
ကိုယ်တိုင် လည်း သောက်နေပါရဲ့ ၊ ကြိုက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်နေပါရဲ့ နဲ့ 
အရက်သောက်တာ ကို အပြင်းအထန် နှာခေါင်းရှုံ့ နေသူ တွေ က တော့
သံကောင်းဟစ်နေသူတွေ ပါပဲ ၊ ဘီဘီစီ ဘီအိုအေ ဆိုတာ သူတို့ ပါပဲ
သူတို့ တွေ ဟာ စာအုပ်ထဲ က ၊ ငပေါ တွေ ပါ ။
သူတို့ ကို သူတို့ ၊ ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် ဖြစ်နေမှန်းလဲ သိကြဟန် မတူဘူး ။
ဒါကြောင့် ဒီကနေ ရေးပြလိုက်ပါတယ် ဗျာ
အရက်အတွက် သက်သေလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး နော် ။
လုပ်ရပ်လေး တွေ ကို ရေးပြတာပါ
လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲ ခွင့် ရှိပါတယ် ။
ဝေဖန်မှု များ ကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ ။
ဟေ့.. အရက်စီ တပုလင်း ရေမရောပဲ ပေးကွာ.. ငါ အခု အဲဒါ လိုအပ်နေတယ်.. ချက်ချင်းနော်.. ရေ မပါစေနဲ့.. ဒါပဲ.. အို့.. (ဂျို့ထိုးသံ)
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အရက်ကောင်းသောက်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဗျ.. Red label လောက်ဆို
Grand3ခါလောက်သောက်မယ့်အစားသူကိုပဲ1 ခါလောက်သောက်လို.ရသားပဲ။
မင်္ဂလာပါ ကပ်ပတိန် ရေ
2006 ကမ္ဘာ့ ဖလားတုန်းက ပေါ့ ဗျာ
မြန်မာပြည် က နာမည်ရ
ကံစမ်းမဲ က လဲ ပါ ဆိုတော့
ကမ္ဘာ့ ဖလား အုပ်စု ပွဲ မပြီးခင်မှာတင်
ရင်ဘတ်တွေ စူးအောင့်လာလို့ 
ယနေ့ ထိပါပဲ ဂျာ
ရှောင်လွဲ မရလို့ 
ကပ်ပတိန် ရေးထားသလို ပဲ
ကောင်းပေ့ ဆိုတာ ပဲ သောက်တော့ပါတော့တယ် ခင်ဗျာ
အရက်ကို သေရည်လို့အမည်လွှဲပေးတာလည်း.. ပြင်သင့်သလို..
သုရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ဆိုပြီး
သေရည် အရက် သောက်စားခြင်း မှ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏ ဆိုတဲ့ ..အဓိပါယ်မှားဖွင့်တာမျိုးလည်း.. ပြင်သင့်တယ်ထင်တာပဲ…။
မူးယစ်မေ့လျှော့စေတာတွေကို.. အလွန်အကျွံမှီဝဲ သုံးစွဲခြင်းတို့မှ . ရှောင်ကြဉ်ရာ၏လို့.. မြန်မာလို… ဘာသာပြန်သင့်တယ်.။
အမှန်ကတော့… မူးယစ်မေ့လျှော့စေတာတွေမှမဟုတ်…။ ဘာမဆိုကိုပါပဲ..။ အလွန်အကျွံမှီဝဲ သုံးစွဲခြင်းမလုပ်သင့်ပါဘူး…။
(မွတ်စလင် မိတ်ဆွေတွေ.. အရက်မသောက်ရလို့.. ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး.. ပုလင်းလိုက်မော့တာမျိုး တွေ့ဖူးလို့ပါ..)
(မွတ်စလင် မိတ်ဆွေတွေ.. အရက်မသောက်ရလို့……… when I been to Pakistan , some drink alcohol like water .Did not mix anything and straight from bottle . After that drive the motorcycle in straight line and go back. ခွက်ပုန်း ။
အင်း အရက်သောက်တာတော့ မကောင်းပါဘူး။ရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပွဲစားလေးထွက်ရင်တော့ ဘီယာလေး မပါရင် ပွဲကိုမစည်တော့တာနော့။ဟိ ဟိ
အရက်သောက်တာ ကောင်းမှုမဟုတ်ပေမယ့် မကောင်းမှုလည်းမဟုတ်ကြောင်း ပို့စ်တစ်ခုကျွန်တော်
ရေးချင်ပါသေးတယ်။ ဘုရားဟော ခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက် ဆယ်ပါးထဲမှာ အရက်မပါပါဘူးတဲ့ဗျာ။ သုစရိုက် ထဲမှာလည်း မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ လူစိတ်လူ့ဥာဏ်နဲ့ သောက်ရင် အရက်က ဒုစရိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ ယစ်ထုတ်တွေအတွက်တော့ အရက်က ဒုစရိုက်ပါ။ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။
ကျူပ်ကတော့ အရက်ဆိုရင် ဘေးကအသံကြားတာနဲ့ တင် စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်မိတယ်။
ကျွန်တော် ကလည်း အရက်ကို မှတ်မှတ်ရရ ၇ နှစ်သားလောက်က ပထမဆုံးသောက်ဖြစ်တာပဲ။
နောက် ၆တန်း ၇ တန်းလောက်ရောက်တော့ အိမ်က လူကြီးတွေက ဘာလည်း ယတြာလိုလို ဘာလိုလုပ် ထားတဲ့ နှင်းဆီပန်း ခုနှစ်ပွင့် ကျောက်ခဲ့ ၇လုံး နဲ့ အရက်နဲ့ရေရောပြီး ထိုးထားတဲ့ ပန်းအိုထဲက အရက်ကို စပြီး ခိုးခိုးသောက်မိနေပြီဗျ.။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲစ၀င်တော့ နေ့စဉ် သောက်ဖြစ်တယ်။ ပထမသောက်တာက အရက်ထက် အရက်ဆိုင်မှာ ဘော်ဒါတွေစုထိုင်ရတာကြိုက်လို့လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ညနေဖက်ဆို သောက်ဖော်သောက်ဖက်ရှာရတာမောလာတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်း ပဲ အရက်ခရီးထွင်ခဲ့တယ်။ အခု အိမ်ထောင်ရက်သားများကျတော့လည်း အိမ်သူသက်ထားက မကြိုက်တော့ အတော်လေးကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေခဲ့ရပါတယ်။ ဘီယာလေး တစ်ခါတစ်ရံမော့သပေါ့လေ။ ဒါပေမမဲ့ အရက်ကလေးကိုတော့ ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူး။ သောက်ပါများတော့ လစ်မစ်တတ်သလို။ မသောက်တာကြာတော့လည်း နည်းနည်း နဲ့ များများမူးတော့ ထူးသပအရသာတစ်မျိုး။
အိမ်မှာ ဟိုက်ကော်မရှင်လေးကုန်တော့မယ် ဒီပို့စ်ဖတ်မှ ၀ယ်ဖို့ သတိရတယ်
အရက်သမားတွေကပြောတတ်ပါတယ်။ သောက်သောက်စားစားလူ့မင်းသား။ မသောက်မစားလူ့ငနွားတဲ။ ကိုယ်လိုရာဆွဲပြောတတ်ကြပါတယ်။ အရက်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်ကြီးဟာ မူးပြီး ကိုယ့်သားကိုပြန်စားတာလေး ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာအများကြီးပါ။ ရှောင်နိုင်ရင်ရှောင်ပါ။ မရှောင်နိုင်ရင်လဲ သောက်ပါ။ ကိုယ်သွားရမဲ့လမ်းဆိုတာ ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရွေး၇မှာပါ။ ကောင်းကျိူးဆိုးကျိုးကိုလည်း ကိုယ်ပဲခံရ စံရမှာပါ။
အရက်ကကောင်းလွန်းလို့ရှေးကတည်းက အခုထိ ခေတ်အဆက်ဆက်ရှိခဲ့တာ။
မကောင်းတာကတော့ အဲဒီအရက်ကိုသောက်တဲ့လူရဲ့ စိတ်ကို အထိန်းအကွပ်မဲ့သွားစေတာပါဘဲ။
အဲတော့ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် မစဉ်းစားနိုင်တော့ အမှားတွေလုပ်မိတာပေါ့။